Bone fracture အရိုးကျိုးခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ ဆရာရေ ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံပေးပါ။ ခု သမီးအမျိုးသား လက်မောင်းရိုး ကျိုးသွားလို့ စတီးချောင်း ထည့်မှ ပြန်ကောင်း မှာလား တခြားတိုင်းရင်းဆေးနဲ့ ဆိုရင်ကော ပြန်ကောင်းနိုင်လား။ တကယ်လို့ ခွဲစိပ်ကုသ စတီးချောင်းထည့်ရင် မြန်မြန် ပြန်ကောင်းမှာလား။ ခု သမီးတို့က့့ မှာ အလုပ်လုပ်နေကြတာ ဒီမှာက မတတ်နိုင်လို့ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ဘယ်လို ကုသမှုခံယူသင့်လည်းဆရာ။ အကြံလေးတောင်းချင်လို့ပါ။ တိုင်းရင်းဆေးနဲ့ စည်းရင် အရိုးပြန်ကောင်း နိုင်လား။
တိုင်းရင်းဆေး မသိ။ အရပ်နည်းတွေ မသိ။ လမ်းဘေးနည်းတွေ မသုံး။
၂။ ဆရာရှင့် Accident ဖြစ်တာ ခြေဖနောင့်ရိုးကျိုးပြီး ခြေဆုံက အရွတ်ပေါက်သွားလို့ ပါဆရာ ဘယ်လိုနေထိုင်ရပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင် ပြန်ကောင်းနိုင်မလဲဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါရှင့်။
အသက် မသိ။ ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာ မသိ။ ဓါတ်မှန်အဖြေ မသိ။ အရင်မေးတဲ့သူက ပိုပြီး မေးနည်းမကျ။
၃။ ဆရာ သမီးညက လက်ကျိုးသွားတယ်။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ပြုတ်ကျလို့ အခုဆေးရုံမှာ။ သမီးလက် ပြန်ကောင်းပါ့မလားဆရာ။
ဆရာဓါတ်မှန်ရိုက်ထားတာပါ။ သမီး အခုနားနေရတယ်။ ပြန်မကောင်းယင်ဒုက္ခပဲဆရာ။ ကျောက်ပတ်တီးတော့ စည်းထားတယ်။ ဆေးလည်းသောက်ပါတယ်။ ဒီလိုဘယ်လောက်ကြာနေရမလဲဆရာ။
ပုံကြည့်လို့မရ။ ဓါတ်မှန်အဖြေစာကြောင်းသာ သိလို။ အရိုးဆိုတာ ကျိုးရင် အလိုလို (ဆေးမပါပဲ) ပြန်ဆက်တယ်။ ဆေးဆိုတာ နာတာရောင်တာအတွက်သာလိုတယ်။ တည့်အောင်လုပ်ပေးပြီး ငြိမ်နေအောင်ထားရတယ်။
အရိုးအားဆေး ထည့်သောက်စရာလိုလားဆရာ။ ကျေးဇူးပါ။
ဖြေထားပြီး အရိုးအားဆေးဆိုတာ မရှိ။ ရှိရင် ကြော်ငြာဆေးသာဖြစ်။
Fracture First Aid အရိုးကျိုးခြင်း ရှေးဦးသူနာပြု
4. Greenstick fracture ကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သော သစ်စိမ်းချိုး ကျိုးခြင်း၊
အရိုးကျိုးခြင်း လက္ခဏာများ = နာကျင်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုခက်ခြင်း၊ မလှုပ်နိုင်ခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ သွေးခြည်ဥခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ ဖိလျှင်-ထိလျှင် နာခြင်း၊ ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းသွားမည်။
Open Fracture အရိုးကျိုးခြင်းနှင့်အတူ အနာအပေါက် ဖြစ်ခြင်း
အရိုးကို မြင်နေရခြင်း၊ ကျည်ဆံ၊ ဗုံးဆံ ဝင်နေခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင် တတ်၍ ဂရုစိုက် ကုသရမည်။ အရိုးကျိုးလျှင် အရိုးကျိုးသည့်နေရာက အရိုး၏ အချွန်များကြောင့် ဘေးမှ တစ်ရှူးများ၊ သွေးကြောများ၊ အာရုံကြောများအား မထိခိုက်စေရန်၊ မလှုပ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးရသည်။
ငြိ်မ်အောင်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ
1. Splints စပလင့် ခေါ် သစ်သား၊ ဝါး၊ သံပြား၊ သံချောင်း၊ စာအုပ်၊ ဂျပ်ပြား စသည်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဘယ်မှာရရ၊ ဘယ်လိုကုကု မိမွေးတိုင်းတော့ မကောင်းတော့ဘူး။ အနည်းနဲ့အများ တခုခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ရောင်တာ၊ နာတာ၊ ကိုက်တာ စသဖြင့်ပေါ့။ ရောင်တဲ့အကြောင်းကတော့ ခိုက်မိတုန်းက အရိုးကျိုးတာသာ လူတွေသတိပြု၊ ဂရုစိုက်ကုကြတယ်။ အရိုးတင် မဟုတ်ဘူး။ ကြွက်သား၊ သွေးကြော၊ အာရုံကြော၊ အဆီ၊ အရွတ်၊ ထိခိုက်မိသမျှ အနည်းနဲ့ အများပျက်စီးစေတယ်။ ဘယ်တစ်ရှူးမဆို ပျက်စီးတာကနေ အာရုံကြော တမျိုးကလွဲရင် ပြန်ဆက်၊ ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်။ အရိုးကြတော့ တည့်အောင်၊ တန်းအောင်၊ ပြန်အလုပ် လုပ်နိုင်အောင် ပြင်ပေးရမယ်။
ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အထဲမှာ သွေးပြန်ရည်ကြောတွေ ပါသွားတယ်။ နေရာတကာ ရှိတာကိုး။ သူတို့ လမ်းပိတ်တာကြောင့် ရောင်စေတယ်။ ကြာလာလို့ လင့်ဖ်တွေ သွားလမ်းသစ် ရလာရင် ရောင်တာ သက်သာလာ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကြားထဲ လမ်းလျှောက်တာ၊ ကြာကြာရပ်တာ ဆင်ခြင်နိုင်ရင် သက်သာစေမယ်။
နာတာရောင်တာအတွက် အပူပါတဲ့ဆေးတွေ အများကြီး။ Diclofenac Gel, Analgesic Gel ဆေးနာမည် တခုခုသုံးပါ။ အနာသက်သာတဲ့ဆေးဆိုတာ နာတာတင်မကဘူး၊ ရောင်တာလည်း ကျစေပါတယ်။ ကိုယ်ပူနေရင်လည်းကျတယ်။ ချွေးထွက်လိမ့်မယ်။ အစာအိမ်လေနာရှိရင်တော့ သတိနဲ့သောက်။ အစာနဲ့သောက်ပါ။ လိမ်းဆေးကတော့ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါ။ တခါတလေ မိုးအုံ့လို့ နာတာ မခံနိုင်ရင် Xyocaine ထုံဆေးလိမ်းဆေး လိမ်းနိုင်တယ်။
ကျိုးတဲ့အရိုး ဆက်တာက သူ့ဖါသာ ဆက်သွားတာပါ။ ဆေးကြောင့် အရိုးဆက်တာမဟုတ်ပါ။ အရွတ်သုတ်တာလဲ အတူတူပဲ။ ကြွက်သားနာတာလည်း အတူတူပဲ။ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ခုခံမှုစနစ်ရှိတယ်။ ပျက်တာကို ပြန်ပြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ အစားအသောက်မှာလည်း ထူးပြီး ကောင်းစေ-ဆိုးစေမရှိပါ။ ဗီတာမင်စီ + ကယ်လ်စီယမ် + ပရိုတင်း (အသား-ငါး-ဥ-ပဲ) တွေကတော့ လိုနိုင်တယ်။ အဲတာလည်း ပုံမှန်စားသောက်တာက လုံလောက်မျှတနေရင် အားဆေးအပိုမလိုပါ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် လွဲစောင်းသွားတာကိုသာ နည့်မတ်ပြင်ဆင်ပေးပြီး အရိုးဆက်ချိန်ထိ အနားပေးထားဘို့သာ လိုပါတယ်။
အရိုးကျိုးတာကို ချက်ချင်းလုပ်မှသာကောင်းတယ်။ အချိန်ကြာလေလေ လွဲစောင်းနေတာအတိုင်း ပြန်ဆက်ဘို့ ခန္ဓာကိုယ်က လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြန်ပြင်ရတာ အတော်ခက်တယ်။ ဆောရီး။